UGary Vaynerchuk Inc 500 Intetho ephambili
NgeCawa, Meyi 27, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Andiqinisekanga ukuba ndiyivile intetho ehambelana ngokusondeleyo nendlela esisebenza ngayo nabathengi bethu. Njengabanye abaninzi abantu endibahloniphayo kwishishini lokuthengisa kwi-Intanethi, UGary Vaynerchuk ayifanelanga ukuba ivuthele umsi ngethiyori… usetyenzisile ngolunya, kuvavanywa, kwaye walungisa iindlela zakhe zokuthengisa kwi-Intanethi- kwaye waphumelela.
Lo ngumba wentetho yesitayile (isilumkiso: inhlamba esetyenziselwa ukugxininisa) ecacisa gca ukuba umhlaba utshintsha njani kwaye kutheni ufuna ukwenza ngoku njengombutho ukutshintsha indlela othengisa ngayo iimveliso kunye neenkonzo zakho. Kuphela ngumcimbi wexesha ngaphambi kokuba ukhuphiswano lwakho lwenze kwaye awunabo abathengi bokumamela. Akukho mzuzu wokutsiba kule vidiyo-nokuba i-Q & A iyamangalisa kwaye iya kuvula amehlo akho. Yibukele!
Khathalela abathengi bakho kwaye ugcine. Iindlela zokufumana izinto ziya kuba nzima ngakumbi, zisenza zibize kwaye zibize kakhulu. Awunakho ukukhuphisana nenkampani enabathengi abonwabileyo nabasukela ubukhulu babo yonke imihla. Yiba yinkampani eneenkampani ezintle kwaye uphindaphindiwe kwintengiso yakho nangaphezulu kunokubonelelwa sisibhengezo.
I-B2B-i-LinkedIn okanye i-Facebook?